Kireynta Kordhinta Webka | Martech Zone
Dad badan ayaa fiiriya qaabeynta bogga caadiga ah waxayna arkaan Websaydh tilmaamaya Wicitaan Ficil ka dibna waxay ku cabiraan Wicitaanka Ficilka iyaga oo adeegsanaya Falanqaynta, iyagoo ugu yeeray a diinta. Haddii aad soo bixin lahayd taas, waxay u egtahay sidan:
Dhibaatada, dabcan, ayaa ah in Web Analytics uu hoy u yahay TONS ee alaabooyin qarsoon oo xog ah oo aan cidina fiiro gaar ah u lahayn ama ka faa'iideysanayn. Caadi ahaan, Falanqaynta waxaa loo adeegsadaa oo keliya in lagu cabbiro ilaha, raadinta, qasabadaha iyo beddelaadda. Ka faa'iideysiga warbixinnadaas, xirfadlaha Suuqgeynta ayaa markaa sameeya xoogaa hagaajin ah iyo saacado si loo arko waxa ku dhacaya warbixinnada. Wareegan rajada ah (waxaad rajeyneysaa inay wax isbeddelaan) ay ku soo noqnoqdaan.
Muuqaalka eegista falanqaynta si fudud oo ah qaabka soo-gudbinta warbixinta waa inuu isbeddelaa. Falanqeyntu si fudud isuguma ahan warbixin soo-gudbin, waa meel aan qiimo lahayn oo lagu keydiyo hab-dhaqanka booqdaha. Si xirfad leh ayaa loo adeegsaday, waxaad dhexgalin kartaa waxa dhabta ah ee boggaaga iyo kanaga Analytics xogta si firfircoon uga bixinaysa waxyaabaha si wanaagsan loogu bartilmaameedsado martidaada.
Qaar ka mid ah Tusaalooyinka Isku-dhafka Falanqaynta Webka
Waxaad leedahay 2 booqdayaal websaydhkaaga ah oo barnaamijkaaga falanqaynta ay la socdaan. Hal booqde ayaa had iyo jeer booqda bartaada isla goob juqraafi ah. Booqdaha kale ee booqdaha ah laakiin dhaqdhaqaaqiisa waxaa lagu raad joogaa Mareykanka iyo Kanada oo dhan. Si kale haddii loo dhigo, waxaad leedahay 2 booqasho oo ku hawlan, laakiin mid baa socdaal ah kan kalena maahan.
Sidee badeecadaada, adeeggaaga, ama xitaa si fudud fariintaada loogu qaabeyn karaa socotada halkii laga noqon lahaa socdaal aan ahayn? Waxaa laga yaabaa inaad ku iibineyso elektaroonig bartaada. Socdaalku waa inuu arkaa laptop-yo fudud, boorsooyinka safarka iyo qalab kale. Rakaabka aan safrin waa inuu heystaa shaashado gurigaaga iyo kombiyuutarada ganacsiga - laga yaabee inuu yahay taxanahaaga bandhigyo waaweyn.
Waxaa laga yaabaa inaad leedahay 'show show' halkaas oo aad booqaneyso magaalooyinka waaweyn si aad u muujiso alaabtaada. Rakaabka aan safarka ahayn, waa inaad ku koobtaa faahfaahinta bandhigga wadada gobolka ay ku sugan yihiin. Rakaabka socdaalka ah, waxaad u habeyn kartaa bandhigga bandhigga waddooyinka magaalooyinka ku xeeran waddooyinka socdaalka qofka.
Haddii aad makhaayad tahay, laga yaabee inaad rabto inaad ku muujiso qaar ka mid ah silsiladahaaga socdaalka socdaal fariin ku saabsan barnaamijka abaalmarintaada ee laga heli karo waddanka oo dhan. Ku socota socotada, fariin ka socota milkiilayaasha ama kuugga ama liiskaaga cusub ee wax laga bixinayo.
Haddii aad tahay Wakaaladda Xayeysiinta, laga yaabee inaad tusto shaqada macmiilka maxalliga ah qofka socotada ah, iyo xisaabaadka qaran ee socdaalka.
Juquraafigu waa hal dhinac oo ka mid ah ka faa'iideysiga falanqaynta. Haddii aad tahay dukaanka dahabka, waxaad u baahan kartaa inaad ku xayeysiiso iibintaada Sannad-guurada booqdaha soo iibsaday jijimadda sannad-guurada 50 toddobaad ka hor. Haddii aad tahay bangi, laga yaabee inaad rabto inaad kobciso sicirka amaahdaada toddobaad ka hor inta aan la bixin lacagta xigta. Haddii aad ganacsade tahay, waxaad u baahan kartaa inaad ku xayeysiiso qiimahaaga ganacsi gaariga aan kaa iibsaday.
Mawduuc firfircoon ayaa muddo ku yara jiray Warshadaha Emailka. Waxaa jira tuulmooyin caddayn ah oo ku habboonaynta waxyaabaha ku habboon habdhaqanka martida ay keenayso natiijooyin aad u sarreeya. Waa waqtigii shirkadaha horumarinta Webka iyo Nidaamyada Maareynta Mawduucyada ay bilaabeen inay fiiro gaar ah u yeeshaan tan. Isku-darka Falanqaynta Websaydhka ee 'CMS'aga ayaa horseedi doonta natiijooyin aad u tiro badan.
Nasiib darrose, xirmooyinka bilaashka ah sida Google Analytics ma bixiyaan API ama heer isdhexgal ah oo aad ka faa'iideysan karto xogta gudaha ah. Si kastaba ha noqotee, shirkadaha waaweyn ee falanqaynta Websaydhka ayaa sameeya. Farqiga u dhexeeya qaababka ayaa shirkaddaada ku waayi kara tobanaan kun oo doolar - laakiin haddii aad si sax ah uga faa'iideysato, soo noqoshada maalgashiga ayaa noqon doonta mid wanaagsan.
Tags: tufaax tufaaxeedsuuq geynta Bluetoothdhawaanshaha Bluetoothsuuq geynta bluetoothgeesranksidee loo qiyaasaa kloutsuuq u dhowaanshahaUnsubscribe
Horraantii toddobaadkan waxaan la hadlay shirkad la yiraahdo Xtract, oo fadhigeedu yahay Finland. Waxay ku takhasusaan bartilmaameedka habdhaqanka iyo ugu dambeyntii, gaar ahaan warbaahinta bulshada. Intii aan lahadlayey, waxaan bilaabay inaan fiiriyo shirkado lamid ah waxaanan helay ganacsi looyaqaano Waxyaabaha (US based). Cunsurka guud wuxuu ahaa awoodda lagu siinayo shabakadaha bulshada cusub macluumaad falanqeyn ah oo ku saabsan dhagaystayaashooda. Tani, markeeda, waxay kordhineysaa qiimaha xayeysiinta ee ololeyaasha la socoshada bogaggan xiriirka bulshada ee xisbiga 3aad.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan eegay waxa ay sameysay Google sanadihii la soo dhaafay iyo sida ay u dhisayaan boqortooyadooda. Waxaad sheegaysaa in falanqaynta Google aysan xilligan bixin API, laakiin waxaan u maleynayaa inay sameyn doonaan si dhaqso badan goor dambe. Intaa waxaa sii dheer, tusaalaha aad ugu adeegsaneyso Juqraafiga markii aad bartilmaameedsaneysid waxaa loo qaadi karaa tillaabada xigta iyadoo la adeegsanayo dhammaan khariidadaha la heli karo iyo tiknoolajiyada raadraaca ee hadda laga heli karo suuqa. Waxaan sameeyay qoraal horraantii maanta oo kusaabsan Google iyo Yahoo Maps.
Sheeko nadiif ah marxaladdan, laakiin ka warran haddii shirkad sida Garmin ay soo gasho ganacsiga falanqaynta iyo suuqgeynta. Waxay awoodi doonaan inay bixiyaan nidaamyadooda GPS-ka oo ay ku beddelaan moodel la taageero oo la xayeysiiyay. Adeegsiga tikniyoolajiyadda dusha sare ee aan faragalin ku sameyn karin macluumaadka daawadayaasha, hubinta in khibrada isticmaaleha aysan isbadalin, waxaa la bixin karaa xayeysiisyo gebi ahaanba ku kooban socotada. Qaado hal darajo oo dheeraad ah kuna dar tusaalahaaga dukaanka dahabka waxaadna leedahay xayeysiis mobayl ah oo ah 3.0. Bartilmaameedsadeen, isticmaale saaxiibtinimo leh oo wax ku bartay falanqaynta ololaha.
Kaliya 2 senti: Waxaan saadaalinayaa Google Analytics API ah 6-da bilood ee soo socda gudahood.
Google aad buu API u jiheysan yahay sidaa darteed waxaan layaabay inaysan jirin mid ilaa iyo hadda socda. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko falanqeeyayaasha 'falanqeeyayaasha' .. si kale haddii loo dhigo .. awoodda lagu sameeyo codsiyada dibadda. APIs waa kuwo cajiib ah, laakiin wali kama dhaqaaqi kartid dhacdo ilaa ay ka dhamaaneyso.